Yintoni eyona ndlela kuhlangana a isipolish kubekho inkqubela elondon kuba ezinzima budlelwane
Ndingumntu British, mhlophe indoda eyenze wachitha uninzi ubomi bam kwi Us kodwa ngoku abahlala elondon. Ndinguye divorced kodwa zange kubekho abantwana kwaye ungathanda ukuba ahlangane a mnandi isipolish kubekho inkqubela. Ndinguye, unit-format, fit, elinolwazi, polite, educated kwaye siphumelele. Ndenze ngolohlobo isipolish inkcubeko sele nomdla kugxila usapho. Ndinguye kanjalo practicing Catholic kwaye nazi okokuba uninzi isipolish ngabantu Catholics.)Ukufumana uluhlu isipolish stores elondon kwaye beka phantsi ngaphandle ngomhla omnye kubo, cashiers ingaba ikakhulu females u babe ukufumana ezinye iincam ukusuka kubo mna kuba kuza ukwazi ukuba isipolish abafazi ingaba mnandi (ngokusekelwe ulwazi). Mna uzamile ukuba badibane nabo kodwa akukho avail. Kodwa babe ngathi ayixhasi namnye ukuba abe hiding. Ndifuna a isipolish umfazi. Lever – akunyanzelekanga isithuko abantu. Ukuba unayo ingxaki, kufuneka khetha ngayo ngaphandle kwe-insulting abantu. Kululuvo ulwaphulo-mthetho ukuhlangabezana oluhle nabantu emhlabeni na? uviko BR. Yintoni i-pathetic phendula a polite gentleman. Ngaba ve insulted umntu kuba akukho sizathu. Kukho akukho ngxaki ntoni ngoko ke ngonaphakade kunye naye esithi ndifuna a isipolish umfazi. Nisolko nje picking kwi indlela wabeka ke ngexesha layo s ucacile ntoni yena ngqo kuthetha. Kanjalo ingaba uyazi ukuba thina? kuba abantu abathe ngqo kuvela izizwe e-Afrika kwaye Kumbindi Mpuma. Ngoko ke, ngaba ve insulted abantu ukusuka ukuba inkcubeko njengoko zinjalo emva kwixesha apho kuwe ll bona nabo kuzo iindawo ngathi i-dubai apho ezininzi abantu andinaku phupha ka ke akuyi kuba iholide. Kufuneka kwakhona a nasty umntu kufuneka ukuba phambi ukuthetha Ngoko ke, kutheni babeya get insulted xa ndithetha inyaniso, ukuze babe siphathe umfazi ngendlela efanayo njengoko baya siphathe camels.
Ngoko ke, kutheni bona musa UKUYEKA oko endaweni hiding inyaniso. Molo guys, ndingumntu yeminyaka ubudala Londoner ye-middles empuma lemveli ezama a isipolish umfazi. Nangona, ndinguye ngempumelelo kwaye owakhe ishishini lam, ndiya kuba ngxi ayifumaneki wam ngcono nesiqingatha. Ukuba ufuna ukwazi a isipolish kubekho inkqubela ubudala, blue amehlo, blond iinwele, incinci nose kwaye kancinci plump, pls uqhagamshelane kum ngexesha Lam ububele. Ezoyikekayo oku boy s (andifuni t kuthi umntu) mentality ukukhetha kubekho inkqubela njenge kokuba ukhethe enye ifenitshala in Ikea s catalogue. Ngokupheleleyo stupid kulawula ngaphandle naliphi na nationality, umbala iinwele amehlo njalo-njalo. Kutheni ruling ngaphandle a mnandi kwaye decent wobulali kubekho inkqubela? Nyulu immaturity. Sam: njani ubudala ingaba kwaye zingaphi abafazi ukhe ngenene ezaziwayo. Kulungile, omnye teenage ukusuka Chicago. Kulungile, boys iya kuba boys kwaye ke baya ll ukukhula kunye nokufumanisa yokwenene ebomini. Yena akakwazi kufuneka impendulo, yicinge ngoluhlobo, ukuba ngaba ayeza kucelwa indlela endala wena mangaphi amadoda unee ufuna ngokwenene ezaziwayo. hayi kakhulu ezilungele incoko kule ngqungquthela, ingaba ucinga. Zonke ungayenza ngu ukwenza assumptions, kwaye akukho ukuthandabuza uza ukuba ufuna okuthile okungakumbi enlightened. Salama: nje isiseko omnye ke imbono phezu ubukhulu okanye ngomhla kakhulu kakhulu iimeko ingaba purely childish kwaye stupid. Ukuba umyalezo ibhalwe ngu a teenager, sibe nokuqonda kodwa ukuba ukususela i-omdala, kubaluleke kakhulu ezibuhlungu. Bangaphi abafazi ukusuka Poland kwaye ukusuka kwenye indawo ethe yena ubuqu ezaziwayo.)? Layo s omnye ke eyakho imbono, childish.
Kodwa ke kwakhona kufuneka umthetho nje childish. Ngoko ke, yintoni yakho kwesizathu. kwenu ingaba akukho teenager. Salama: ufuna nje argue ngenxa arguing. Musa t undixelele ukuba basing omnye ke imbono phezu (ubukhulu okanye amatyala) lenza ezinzima kwaye nkqu yokubhalwa. Kwaye ewe, kuya kubonisa immaturity okanye ecacileyo stupidity.
Salama: apha, ndiza nani.)
Asinako thetha ne-wonke ihlathi ngokuthi ujonge kwi enye kuphela umthi). Basing omnye ke, uluvo okanye iimeko ngu needless ukuthi hayi kakhulu.
Ndiyazi ukuba akufunekanga unakekele enjalo crap kodwa njengoko ngumsebenzi karhulumente, baya kufuneka ibe waxelela loo ukucinga ngu ngokupheleleyo stupid kwaye useless. Mna m ngonyaka- old i-american guy studying elondon, kwaye ndifuna ukuya kuhlangana abanye Iipali xa ndiza apha. Nangona mna wazalelwa waza wavusa eamerika, ndithetha kufutshane fluent isipolish kwaye bamba isipolish * ngokusebenzisa abazali bam. Nangona kunjalo, ndiya kuba zange ngenene wachitha kakhulu kakhulu ixesha Poland (ngeveki okanye u-wonke ambalwa eminyaka max), kwaye ndingathanda ukufumana ukwazi ukuba yinxalenye wam lemveli ngcono (i-kanjalo, ukususela ndalishiya ikhaya ngonyaka eyadlulayo wam isipolish sele bathabatha i-jika kuba worse ukusukela mna ayisasebenzi kuthetha ngayo kwi yonke imihla qho nabazali bam, kwaye ndiya ngenene musa ufuna alahlekelwe nako ukuthetha ngayo). Ngoko ke, ndiza bemangalisiwe apho elondon mna unako ukufumana kwaye incoko ukuba Iipali. Mna ve ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku balingwe wam iyunithi s isipolish society, kodwa abazange kuyanqaphazekaarely kuhlangana kwaye mna ve ifumanise ukuba amalungu azo ukuba abe ngenye cliquey (bonke nokwazi ngamnye ezinye ukusuka i-warsaw kwaye ingaba kakhulu ziqinile knit, mna ke ngakumbi curiosity kuba kubo njengoko i-i-american abo nokuthetha isipolish). Uzibona guys recommend, mna jonga. Mna ve kanjalo wayecinga malunga renting a cambalala kwi-i-warsaw oku ehlotyeni kuba mhlawumbi ngeveki okanye ezimbini (Airbnb) ukuzama immerse ngokwam kwi-inkcubeko. Ukwenza Iipali kwi-Poland kuba favorable imbono ka-Americans. Lever kuwe kwakhona insulting Europeans kwaye disparaging imeko nge ugqirha ngayo ukuya Kumbindi Empuma society (camel orhwebo) kwaye uzive akukho zeentloni nantoni na. Layo s pretty obvious ukuba ufuna kwakhona i-Isigrike kunye umzekelo demeanor. Ngoku eli-British gentleman ezama ngaphandle a isipolish elonyuliweyo kuba enokwenzeka elizayo mlingane yinxalenye European abantu. Senza phakathi zethu kunye abantu bethu kunye homelands akufanele na nkxalabo ukuya Levantine. Thina Europeans sibanye abantu abaphila ezininzi amasebe kwaye zethu kunye iyantlukwano apho kuthi
← Budlelwane - free Dating site kuba ezinzima budlelwane
Isi-Italian Lencoko →